Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Accepted the Bias Local Media but condemning the TRUTHFUL International Media
Governments before and after elections »
Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party
ပါတီများမှတ်ပုံတရင်ာ၌“လူမျိုးရေး(သို့)ဘာသာရေး(သို့) အများအေပ်ါထိခိုက်စေနိုသင်ည့် ရေးသားမှု၊ဟောပြောမှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမပြုရန်နှင့် ဘာသာရေးအားနိုငင်ံရေးအတွက် အမြတ်မထ်ုရတန်ဟူ၍စည်းကမ်းချက်များပါရှိထားပါသည်။ ထိုအချက်များအားဆန့်ကျလင်ာပါကထိုပါတီအားကော်မရှမင်ှ ဖျက်သိမ်းရပါမည်။ထို့ကြောင့် RNDPပါတီမှ ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ နိုဝဘင်ာလအတွင်းထုတ်ဝေသောအတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၂)မြောက် “တိုးတက်ရေး”သတင်းလွှာ၏စာမျက်နှာ (၁၈)ပါ“မာဃသစ္စာ”ဆိုသူ၏“ရခိုင်ပြည်နယ်ပြိုကွဲခဲ့လျှင်” ဆောင်းပါးသည် အထက်ပါပါတီများမှတ်ပုံတရင်ာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအားမလိုက်နာဘဲ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြ င်းကြောင့် နိုငင်ံတော် အာဏာရအစိုးရမှ ယင်းအေခြအေနအေပါ်ဥပေဒကို လေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့် စံပြသေဘာဆောင်၍RNDPပါတီအား ဖျက်သိမ်းပေးပါရန် နိုငင်ံသားတစ်ဦးအေနဖြင့် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။RNDPပါတီသည် တိုင်းပြည်အား ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေရန်၊နိုငင်ံတော်တာဝန်ရှိသူများမျက်နှာပျက်စေရန် အကြိမ်ကြိမ် ဖန်တီးခဲ့သောဘာသာရေးအစွန်းရောက် အဓိကရုဏ်းဖန်တီးသည့် ပါတီဖြစ်ပါ၍ အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းပေးပါ။(မြန်မာမွတ်စလင်မ်တိုင်းမိမိ FriendListsအတွင်းရှိ နိုငင်ံတော် တာဝ်ရနှိသူများ မြင်တွေ့သိမြင်နိုင်ကြေစရန် ပြန် Shareပေးကြပါ)Credit to -Kay Te Zat O
This entry was posted on December 28, 2012 at 2:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party”
December 28, 2012 at 3:02 am | Reply
TQ Kay Te Zat O & Muhamard Zubai Arakany, let me share in FB and my blog. Giving warning is just treating them with kid gloves and just slapping on the knuckled. They must be de-registered, leaders arrested and charged in the jail-courts if U Thein Sein is scared that they would spill the beans by revealing the secret sensitive evidences of Myanmar Military Hardliners in his government’s involvement.
December 28, 2012 at 3:28 am | Reply
Myanmar: Isawarning by the Election Commission enough for offense against Islam by the RNDP? December 27, 2012
M-Media @ http://m-mediagroup.com/en/archives/7397
By violating (i) the Constitution, (ii) existing laws, and (iii) the Political Parties Registration Law, the official political publication of the
who himself chairs the Citizens‘ Fundamental Rights, Democracy and Human Rights Committee at the Amyotha Hluttaw (the Upper House) has committed the following-
လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် လူသတ်နာဇီဝါဒ ထွန်းကားဖို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တရားဝင် စာစောင်ထုတ် လှုံ့ဆော်နေတဲ့ RNDPထက် နာဇီဝါဒ ထွန်းကားရေးအတွက် အခုလို လှုံ့ဆော်နေခြင်းကို နှာစေး မသိကျိုးကျင်နေတဲ့ အစိုးရနှင့် ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေက ပိုပြီးတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုတာဝန်မဲ့နေကြခြင်းအတွက် တစ်နေ့ အဖြေပေးရမယ်ဆိုတာ မသိကြလောက်အောင် ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမှာ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေကြပြီလား။ ရှက်ရမှန်းကော မသိကြဘူးလား။ လူသတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတဲ့ RNDPထက် လူသတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေက ပိုပြီးအံ့သြစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
RNDP ပါတီထုတ် တိုးတက်ရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၂) နိုဝင်္ဘာ ၂၀၁၂ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“ဟစ်တလာနှင့် အိုက်ခမန်းသည် ဂျူးများအတွက် မဟာရန်သူကြီးဖြစ်သော်လည်း ဂျာမန်များအတွက်တော့ သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အမေရိကန်သည် ဟီရိုရှီမားနှင့် နာဂါစကီးမြို့များကို အနုမြူဗုံး ကြဲချခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်။ လူသားမဆန်သည့် လုပ်ရပ်သည် တစ်ခါတစ်လေမှာ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လုပ်ခွင့်ရှိမည်ဆိုလျှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရခိုင်လူမျိုး ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရခြင်းသည် လူသားမဆန်ဆို၍ကား ရနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။”